အခုတော့ join | Holmbygden.se
အတွက်အထောက်အပံ့ Holmes ဒေသများနှင့် HBU – မှတ်ပုံတင်မယ်!
သင်တို့သည်ငါတို့၏ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့ပါနဲ့. Brukar du kanske besöka Holmbygden.se och vill ha kvar hemsidan? HBU ၏ပျော်ရွှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်!
လာရောက်ပူးပေါင်း #ShepherdsHut သငျသညျ Holmes များအတွက် HBU ရဲ့အလုပ်ကိုထောက်ပံ့သောပြသရန်တစ်ခုသိသာနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ခရိုင်များတွင်တစ်ဦးကအလွန်စျေးပေါသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု. ပိုက်ဆံဥပမာ, ကိုအသုံးပြုသည်. site ကိုမောင်းထုတ်ရန်, Allbergsdagen သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များအရိပ်လက္ခဏာအဖြစ်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များစုစည်း M.M..
ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဒါဟာအစဖွင့်ပြသနိုင်ဖို့အဖွဲ့ဝင်များကပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုအပ်. အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံးတရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည် 50 SEK မှ “တွက်ချက်”. ပိုအဖွဲ့ဝင်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်ဖို့ပိုပြီးထောက်ခံမှုအရှင်ပြီ. သာများအတွက်မိသားစုတစ်စုလုံးကိုယူခဲ့ 100 Kr!
50kr / လူတစ်ဦးသို့မဟုတ် 100 SEK / မိသားစုပေးဆောင်
– PlusGiro 197 34 26-8 သို့မဟုတ်
– Swish 070-537 11 22 (“Niklas Wikholm” HBU မှအက်ဖ်ဒဗလျူများအတွက်)
OBS! မိသားစုမှာလူတိုင်းများ၏အမည်များရေးရန် ငွေပေးချေမှုမက်ဆေ့ခ်ျမှပြောပြတယ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပေးပို့သူကိုသိသော. အခန်းတစ်ခန်းရှိလြှငျနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ရေးသားဖို့ဒဏ်ငွေဒါဟာင်.
အောက်ပါသင်၏အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအောက်တွင်ဖြည့်ပါနဲ့ပေးပို့, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျနော်တို့ရွာနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူရှိ. HBU ယခင်ကရရှိခဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ, သင်မပို့ကြဘူး. (ကျနော်တို့ mail နဲ့သာအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များမရှိသလောက်ပြုပါ.)
အောက်က form မှာသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး (t.ex. "901231-1234"):*
အလုပ်အဖွဲ့ / ဆယ်လူလာဖုန်း 2:
နာမတျောကို - မိသားစုဝင်တစ်ဦး 2:*
နာမတျောကို - မိသားစုဝင်တစ်ဦး 3:*
နာမတျောကို - မိသားစုဝင်တစ်ဦး 4:*
နာမတျောကို - မိသားစုဝင်တစ်ဦး 5:*
ငါ / ကျနော်တို့ HBU ဖို့သီးသန့်လုံခြုံရေးအက်ဥပဒေအောက်မှာငါ့အ data တွေကိုကိုင်တွယ်သဘောတူ (ငွေ).*
သင်တို့သည်လည်းအောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များ email ပို့နိုင်ပါတယ် info@holmbygden.se.
သိကောင်းစရာများ! အောက်ပါ copy, သင့်ရဲ့အီးမေးလ်များသို့ paste ပြီးတော့အတွက်ဖြည့်ပါ!
အလုပ်အဖွဲ့ / ကား. 2: